Xiisedarrida doorashada EU ee hogaamiyeyaasha xisbiyada iyo bulshada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xiisedarrida doorashada EU ee hogaamiyeyaasha xisbiyada iyo bulshada
La daabacay onsdag 22 januari 2014 kl 16.17
Sannadkan eynu ku guda jirno ee 2014 ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay sannadkii doorashooyinka, iyadoona dhoowaantan, afar bilood dabadeed ay dhici doonto doorashadii xubnaha baarlamanka ee is-baheeysiga EU-da. Hase yeeshee dood culus oo toddobaadkii ina dhaafay dhex-martay hoggaamiyeyaasha xisbiyada ee dalkan socoteyna muddo afar saacadood kor u dhaafeysa aan marnaba lagu soo hadal qaadin ururka EU-da iyo siyaasaddiisa. Waa xaalad aan wanaag.sanayn, sida uu aamin-san yahay caalin ku takhasusay culuunta siyaasadda dawladda Magnus Blomgren oo ka howl-gala jaamicadda Umeå:
- Waa xaqiiq jirta iney doodaha la xiriira EU-da ka marnaayeen labadaba doodihii hogaamiyeyaasha xisbiyada iyo guud ahaan doodaha dalka ka aloosanba. Waa xaalad khatar ah oo aan wanaag-sanayn kolka laga eego dhanka nidaamka talo-wadaagga. Iyo maadaama ay doorashadii xubnaha baarlamanka ee EU-du ka qabsoomi doonto dalka bisha maajo oo ey afar bilood ka har-san yihiin.
Muddadii afarta saacadood kor u dhaafaysey oo ey doodda hogaamiyeyaasha xisbiyadu ka socotey xarunta baarlamanka ayaa laba jeer oo aan sidaa macne ugu fadhin lagu carabaabey ururka midowga Yurub. Åsa Romson oo ka mid ah labada hogaamiye ee xisbiga Doogga oo mar carabaawday ururka mar ay ka hadleeysay siyaasadda cimilada iyo Björn Söder, kana mid ah xubnaha xisbiga midigta fog ee SD oo sidoo kale carabka ku dhuftay mar uu su'aal weydiinayay hogaamiyaha xisbiga Shacabka, Jan Björklund iyo inuu doonayo in Midowga Yurub uu noqdo sida nidaam Federaal ah oo ey xubno ka yihiin waddammada ku midoobey.
Arrintaa ayuu ku tilmaamay inay ahayd mid la filayey, sida uu sheegay Magnus Blomgren:
- Tallaabadan ayaa noqotay sidii ey dad badaniba filayeen in doorashada xubnaha baarlamanka ee EU-du ku meel-gaar u tahay doorashada maamullada dalka oo qabsoomi doonta bisha septeembar ee isla sannadkan.
Waana mid muujineeysa oo keliya in ka hadal yaraanteedu ay ka tarjumeeyso ka maqnaanshaha xiisaha EU-da. Mase tahay mid la is weeydiin karo?:
- Xaqiiqdii haa, waa su'aal la is weeydiin karo. Sidoo kale ma ahan arrin u wnaag-san.
Göran Färm oo xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga u matalayey xubnaha baarlamanka ee Eu-da laga bilaabo sannadkii 1999 ayaa aamin-san in ka doodis-la'aanta arrimmaha ururka EU-da ee hogaamiyeyaasha xisbiyadu ey ugu wacan tahay in aaney u arag iney bulshada cod kaga kasban karaan doorashada awoodda maamullada dalka ee sannadka dhici doonta.
- Khatarta ay middaasi leedahay ayaa ah inay hor-seeddo in aaney bulshada iswiidhishku u arag muhiimad doorashada xubnaha baarlamanka ee EU-da. Halka xaqiiqdii go'aammo badan oo muhiimad ugu fadhiya dalka lagu gaaro xarunta ururka. Waa mid hor-seedeysa iney kororto farqiga u dhexeeya siyaasadda iyo habka talo-wadaagga ee dimoqoraadiyada.
Waxaa dhanka kale jirta in xeerarka laga go'aamiyo ururka midowga Yurub ey ka sarreeyaan xeer-qarameedyada dalka. Sidaa daraadeed ma ahan suurtagal in hoggaanka ururka EU-da lagu wareejiyo masuuliyadda u ololeeynta xubnaha 20-ka gaarsiisan ee dalkani ku yeelan doono xubnaha baarlamanka ee ururka EU. Masuuliyadda ololeeynta iyo in bulshada lagu dhiir-geliyo siday uga qeeyb-qaadan lahayd, waa mid saaran xisbiyada iyo hoggaamiyeyaasha xisbiyada dalka ka jira, masuuliyad u dhiganta midda doorashada qaranka ee dhici doonta bisha septeembar ee 2014, sida uu sheegay Göran Ferm:
- Ma ahan xil-dhibaannada kuwa la dooraneyo. Cidda la dooranayo waa xisbiyada. Sidaa daraadeed ayay muhiimad u leedahay in si siyaasadda ururka loo mideeyo loo baahan yahay siyaasad mideey-san oo ey yeeshaan degmooyinka, gobollada, qarammada iyo midda guud ee ururka EU. Sidaa daraadeed ayay aniga laf ahaanteeyda iigu caddahay doorka ey hoggaamiyeyaasha xisbiyadu ku leeyihiin hoowlaha la xiriira siyaasadda gebi ahaan.
Christofer Fjellner wuxuu ka mid yahay xil-dhibaannada baarlamanka EU-da u metela xisbiga Mudaraatka, hase yeeshee kaga duwan Göran Färm, inuu mar kale jagadaa u taagan yahay. Fjellner ayaa sidoo kale aamin-san inay tahay mid laga xumaado xiise-darrida doorashada xubnaha baarlamanka ee midowga Yurub. Isagoona masuuliyad ballaaran dusha ka saaray hogaamiyeyaasha xisbiyada iyo sidii ey dood middaa uga abuuri lahaayeen:
- Ma qabo in laga baqo su'aalaha la xiriira siyaasadda EU-da iyo in lagu fekero inay tahay wax ka duwan. Waa su'aalo la xiriira gun-dhigga siyaasadda. Haddii doodda hogaamiyeyaasha aan ka qeyb qaadan lahaa halka uu Fredrik Reinfeldt kaga jiray, waxaan oran lahaa inaan u codeeyn doono xubnaha xisbiga Mudaraatka ee u sharaxan baarlamanka EU-da, maadaama aannu nahey xisbi siyaasaddiisu ku dhisan tahay ilaalinta canshuuraha laga qaado bulshada, aannu dagaal xooggan ku heyno nidaamka qalaf-san ee "byråkrati-iga" afkan lagu yiraahdo iyo siyaasadaha aan wanaag-saneyn sidoodaba. Waxaan sidaa uga howl-galnaa maamullada degmooyinka, kuwa gobollada iyo sidoo kale hoowlaha baarlamanka. Sidaa daraadeed cidii xubnahayega ugu codeeysa doorashada xil-dhibaannada baarlamanka EU-da waxaannu u qaban doonnaa hoowlo la mid ah kuwa aan kor ku soo sheegay.
Sida ey xisbiyadu ugu kala duwan yihiin siyaasadda dalka ayey ugu kala duwan yihiin siyaasadda baarlamanka EU. Iyada oo mararka qaarkood ey dhacaan in kala duwanaanta siyaasadda EU-du kaba sii adag tahay, sida uu sheegay Göran Färm oo EU-da u metela xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga. Waana fikirrada loo baahan yahay iney hogaamiyeyaasha xisbiyadu soo ban-dhigaan oo ka shaqeeyaan:
- Haddii la eego dhanka siyaasadda dhaqaalaha, waxaa soo shaac-baxaya kala duwanaanta garabka doonaya in la xakameeyo iyo kuwa dooneya in la baahiyo.
Haddii laga eego dhanka xuquuqda macaamiisha, xoogsatada, cimilada iyo sida ey garabyadu ugu kala duwan yihiin sidii wax looga qaban lahaa iyada oo siyaasadda la adeeg-saneyo. Sidaa daraadeed iima muuqato wax hor is-taagi kara in doodda miiska la soo saaro, waa haddii la dooneyo, sida uu sheegay.
Ma jiraan wax caddeeynaya inuu is-bedel ku yimaado xiisaha doorashada xubnaha baarlamanka ee EU-da, sida uu qabo caalinka Magnus Blomgren. Iyada oo ey jiraan cilmi-baarisyo lagu ogaadey in hadba sida ay doorashada EU-du ugu dhowaato doorasho qarameedka, la saaro xiisaha inta badan doorashada qaranka ee loogu hardameyo awoodda maamullada dalka, hadday noqon lahayd midda degmada, tan gobolka iyo midda dawladdaba, sida uu sheegay:
- Maanta ayaa la oran karaa iney jiraan laba nidaam-siyaasadeed. Nidaamka Miodwga Yurub oo dhankiisa u taagan iyo kan qarameedka oo dhankiisa u taagan. Hase yeeshee uu nidaamka EU saameeyn ballaaran ku leeyahay kan qarameedka. Waa mid u baahan in niyadda lagu hayo.
Ma ahayn iney sidaa u kala faqooqan yihiin?
- Marnaba. Waxay ahayd in doorashooyinka si qeexan la isugu lifaaqo. Masuuliyadda ugu ballaaranina waxay saaran tahay xisbiyada, hase yeeshee aaney maanta ka soo bixin. Horeyna ugama aaney soo dhallaalin kolka laga hadleyo doorashada xubnaha baarlamanka ee EU-da.